PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - Uyaziqhenya ngakwenzele i-Arrows
Uyaziqhenya ngakwenzele i-Arrows
OBENGUMQEQESHI weLamontville Golden
Arrows, uClinton Larsen, uthi ukwehlukana kwezimbaxa phakathi kwakhe naleli qembu akusho ukuthi sekufanele axhamazele azithole esethatha noma yimuphi umsebenzi oqhamukayo.
Lo mqeqeshi owehlukene naBafana Bes’thende ngoLwesithathu, utshele Isolezwe ngeSonto ukuthi bahlukene kahle ne-Arrows ngemuva kokuvumelana ngokuthi mhlawumbe sekudingeka umuntu omusha ozofika namaqhinga amasha.
“Senginamava kulo msebenzi wokuqeqesha ngakho angizimisele ngokuvele ngigxumele noma yimuphi umsebenzi ngoba ngithi angisebenzi.
“Kusukela ngiqala ukuqeqesha ngo 2010 angikaze ngingabi nawo umsebenzi ngakho ngifuna ukuthi ke ngikhokhe umoya ngihlele kahle impilo yami.
“Ngizothatha isikhathi sami. Iqembu elingifunayo kuzodingeka ngiqale ngizwe ngezifiso zalo kuqala nokuthi ngabe ziyezwana nendlela engenza ngayo izinto,” kubeka uLarsen.
Uthi esikhathini asichithe kwiArrows uhlale kahle, futhi ubesebenza ngokubambisana okuhle nabadlali abadala abanjengoMusa Bilankulu noSiyanda Zwane kanye nethimba lonke labaqeqeshi.
“Ngihambe kahle kwi
Arrows. Eminyakeni emithathu ngikuyona ngiyaziqhenya ngokuthi iqembu belilokhu liqeda kwi-Top 8.
“Mhlawumbe ozofika uzokwazi ukuthi alibeke kwi
Top 4 noma 5 kwi-log,” kuqhuba uLarsen.
Ebuzwa ukuthi ukuhlulwa
kwakhe ngaMaZulu kungabe yikho okube nomthelela ekutheni kwehlukane izindlela kuyena neqembu, uthe akacabangi ngaleyo ndlela uma ubheka izinselelo iqembu ebelibhekene nazo.
“Ngeke kwaba yimiphumela ngoba emidlalweni eyisishiyagalolunye sihlulwe wamunye kuphela. Ngiyavuma sidlale ngokulingana kweminingi kodwa lokho kungenxa yezinselelo zokulinyalelwa ngabadlali abaningi nokuthi iqembu lishaya ngenjejane eningi yabadlali,” kusho uLarsen.
Mayelana nokuthi angasemukela yini isicelo seBloemfontein Celtic nayo eshiywe ngumqeqeshi uSteve Komphela ovumbuke kwi-Arrows ngoLwesihlanu, uthe ubevele ebonile ukuthi lo mbuzo uzogcina uqhamukile kodwa akazimisele ngokuphanga umdaka izulu linganile.
“Njengoba ngike ngasho ukuthi angizimisele ukuthi ngithathe umsebenzi ngoba nakhu ngithi angisebenzi. Khona ngahamba kahle kwiCeltic futhi ubudlelwano bami nayo ngisalokhu ngibugcine bubuhle. “Nakhona kungaba wukuthi ngihlala nabo phansi ngithole kahle ukuthi abaphathi beqembu yini abayihlosile ngalo nokuthi izinhlelo zabo yizinto ezingenzeka ngezinsizakwenza abanazo,” kusonga uLarsen.
UWILLARD Katsande weKaizer Chiefs noJustin Shonga we-Orlando Pirates ababhekene nenselelo nozakwabo ekutholeleni amaqembu abo izicoco ngo-2019 Isithombe: BACKPAGEPIX